यस्ता रोगबाट ग्रष्त हुनुहुन्छ ? दुधमा लसुन मिलाएर पिउँनुहोस् त्यसपछि चट् - Internet Khabar
यस्ता रोगबाट ग्रष्त हुनुहुन्छ ? दुधमा लसुन मिलाएर पिउँनुहोस् त्यसपछि चट्
एजेन्सी । स्वास्थ्यको लागि दुध पोशाक तत्व हो । बालक देखि वृद्ध सम्मलाई शक्ति र रोगबाट मुक्तिको लागि दुध पिउनु आवश्यक हुन्छ । विभिन्न रोगले ग्रसित भएको अवस्थामा समेत रोगमा केही घरेलु चिज मिलाएर त्यसलाई औषधिको रुपमा पिउन सकिन्छ । अन्य औषधिले रोग हटाएतापनि शरीरको शक्ति कम गरिदिन्छन् भने दुधको मिश्रणले शरीरको शक्ति समेत बढाइदिन्छ।
दुधमा लसुन झट्ट सुन्दा नमिल्दो सुनिन्छ । तर दुध र लसुनको मिश्रणले धेरै रोगबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ । यसको लागि एक गिलासमा दुधमा तीन वटा केस्रा लसुनको आवश्यकता पर्छ । लसुनलाई केलाएर सानो सानो टुक्रामा काट्नुपर्छ । अब एउटा भाँडोमा दुध तताउन बसाल्नुपर्छ र दुधमा ती लसुनका टुक्रा राख्नुपर्छ । लसुनका टुक्रा राखिसकेपछि दुधलाई केही छिन उम्लिन दिनुपर्छ । यसो गर्दा लसुनमा भएको तत्व निस्किन्छ र त्यो दुधमा मिल्छ।
लसुन राखिएको दुधलाई केही समय उमालिसकेपछी त्यसलाई छानेर गिलासमा राख्नुपर्छ । लसुनका टुक्रा भने गुलेका हुँदैनन् । आफ्नो इच्छा अनुसार, ती लसुनका टुक्रालाई यत्तिकै चपाएर खाँदा पनि त्यसले फाइदा गर्छ । इच्छा नभएमा नखान पनि सकिन्छ। गिलासमा राखिएको दुधलाई मनतातो भएपछी पिउनुपर्छ।
लसुन मिश्रित यो दुधले कोलेस्ट्रोलको समस्या भएका व्यक्तिहरुलाई फाइदा गर्छ । रगतलाई पातलो बनाइदिन्छ । यसले पाचन प्रक्रियालाई राम्रो गर्छ । ग्यास्ट्रिक तथा कब्जियत जस्ता समस्याबाट छुटकारा दिलाउँछ । सामान्य टाउको दुखाइ देखि माइग्रेन रोग सम्मको लागि यो दुधले औषधिको काम गर्छ । यसको लागि राती यो लसुन मिश्रित दुध पिएर सुत्न सकिन्छ । साथै यो दुधले हाडजोर्नीको दुखाइबाट पनि छुटकारा दिलाउँछ।
राजतन्त्र फर्कने सपना नदेख्नु : प्रधानमन्त्री ओली
आँखालाई सुन्दर मेकअप गर्ने सजिलो तरिका (विधि सहित)
तपाईं गरीब या धनी कस्तो बन्दै हुनुहुन्छ ? यस्ता छन् संकेत
ढोका नजिकै राख्नहोस् यी ५ चीज, जसले घर पस्दा नै दिन्छ सकारात्मक ऊर्जा